Ogaden News Agency (ONA) – Norway: Kulankii Afraad ee Xubnaha Jaaliyadda oo qabsoomay
Oslo: Waxaa maanta oo Sabti ah ka dhacay wadanka Norwey caasimadiisa Oslo, shirkii xubnaha Jaaliyadda Soomalida Ogaadenya ee ku dhaqan Oslo iyo nawaaxigeeda.
Shirkan oo ahaa kii billaha ahaa laakiin se haddana si gaara ay xubnuhu u xiiseeynayeen maadaama goobta kulanka lagu soo bandhigayey waxqabadkii maamulka ee Afartii bilood (4) ee tagay ayaa ku qabsoomay si wanaagsan oo wadaniyad leh.
Shirkan oo Sheekh Abdiwali Garaad, ku furay aayado kamid ah Quraanka Kariim ayaa waxa lagusoo bandhigay hawlihii maamulka qabteen illaa egga iyo qorshaha maamulka Jaaliyaddu higsan hayo muddada dhaw.
Shirka waxaa warbixinno khuseeya qeybaha kala duwan ee Jaaliyadda kulanka kusoo bandhigay si cilmiyaysanna u soo jeediyey, Madaxa Dhaqaalaha Md. Abdiwali Soomane, Md. Abdiqadir Iltol, oo ah Madaxa Warfaafinta iyo Xoghaynta Jaaliyadda, Md. Abdishakuur iyo Marwo Hamdi Cali, oo warbixinno waafi ah xubnaha ka siisay hawlaha looga baahan yahay ururka haweenka & meesha ay marayaan qaban-qaabada Festivalka sanadkan.
Gudoomiyaha Jaaliyadda Xaaji C/laahi, ayaa isna ku dheeraaday fulinta qorshaha sanadka 2013 iyo hawl-qaybsiga xubnaha maamulka, middaas oo guul la taaban karo laga gaadhay afartii bilood ee tagtay, haddana la sii xoojin doono inta ka dhiman.
Shirkan oo aad loogu riyaaqay sidii loo soo qabanqaabiyay iyo agaasinkiisi ba wuxuu ku dhammaaday jawi farxad leh iyo rajo wanaag aad u sareysa oo laga qabo sanadkan in la gaadho guulo waaweyn.
Ugu dambeyntiina shirka waxa lagu soo gabo gabeeyay hambalyo loo soo jeediyay CWXO guulihii ay bishan kasoo hooyeen goobaha dagaalka ee gudaha Ogadenia.